Poco M3 Pro, Redmi Note 10S iyo Redmi Note 10 Pro qiimo aan la diidi karin | Androidsis
Qalabka mobilada iyo saacadaha casriga ah ayaa culeys ka helayay suuqa, iyagoo ah labo ka mid ah wax soo saarka ilaa hadda baahida ugu badan. Dhexdooda qaar ka mid ah moodooyinka ayaa ku ifaya iftiinkooda, sida Poco M3 Pro 5G, Redmi Note 10S, Redmi Note 10 Pro iyo Xiaomi Mi Band 6.
Xariirka caanka ah ee loo yaqaan 'AliExpress portal' wuxuu leeyahay dalabyo fara badan, oo ay ku jiraan moodooyinka aan soo sheegnay oo qiimo dhimis weyn ku yimid kuwa hadda raadinaya inay beddelaan taleefankooda ama garaadkooda casriga ah. Mid kasta oo ka mid ah taleefannada waxaa laga iibsan karaa qaabeyn kale oo RAM ah iyo keydinta gudaha ah.
Wax yar baa ka mid ah taleefannada kala duwan ee la bilaabay bishii Maarso, dhammaantoodna leh qalab awood leh oo runtiina u baahan wixii shuruud ah. Little M3 Pro waa la heli karaa on AliExpress loogu talagalay 196 euro qaabka leh 6 GB xusuusta iyo 128 GB oo keyd ah, oo lagu ballaarin karo adigoo haysta dhinac dhinac ah.
Ka mid ah qaababka ay 6,5-inch Full HD + LCD shaashadda ayaa ku ifaysa 90 Hz heerka cusbooneysiinta, Gorilla Glass 3 iyo DotDisplay. 6 GB RAM waa nooca LPDDR4x, halka keydku yahay UFS 2.2, oo uu weheliyo batari 5.000 Mah ah oo leh 18W lacag deg deg ah.
Waxay ku qalabeysan tahay afar kaamiro, seddex waa gadaal, halka midkood uu horay u socdo. Dhanka dambe, Poco M3 Pro 5G wuxuu yimaadaa inuu dhalo lens-ka ugu weyn 48-megapixel, midka labaadna waa 2-megapixel macro, halka midka seddexaad uu yahay lens-ka qoto dheer ee 2-megapixel. Dhanka hore waa 8 megapixels.
Waxay ku timid qalabaysan processor-ka Dimensity 700, Mali-G57 MC2 graphics chip, marka lagu daro isku xirnaanta sare, oo ay ku jiraan 5G, Wi-Fi, Bluetooth, NFC waana Dual SIM. Nidaamka qalliinka waa Android 11 oo leh interface MIUI 12, dhammaantood waa la cusbooneysiin karaa MIUI 12.5 iyo noocyada mustaqbalka.
1 Xiaomi Redmi Xusuusin 10S
2 Xiaomi Redmi 10 Pro
Xiaomi Redmi Xusuusin 10S
Waxaa lagu soo bandhigay taxanaha Xusuusta 10 ee Xiaomi sida mid ka mid ah taleefannada xiisaha leh ee heerka gelitaanka sababtoo ah qaabeynta isku dhafan. Telefoonka leh qaabeynta 6/128 GB waa la iibsan karaa on AliExpress 189 euro, halka 8/128 GB uu ku socdo 227 euro.
Redmi Note 10S waxay ku dhejisaa shaashad 6,43-inch Super AMOLED Full HD + ah, oo leh anti-xoqid iyo ilaalin naxdin leh, oo ka timid sumcadda caanka ah ee Gorilla Glass. Gudigu waa dhalaalayaa, waa mid ka mid ah waxyaabaha ugu muhiimsan, marka lagu daro ku dhowaad dhammaan shaashadda, cirifka ayaa laga arki karaa xagga hoose.
Waxay kudhisantaa Helio G95 processor ahaan, 6/8 GB oo xasuusta RAM ah LPDDR4x, 64/128 GB oo keyd ah taasna waa la ballaarin doonaa iyada oo ay ugu wacan tahay booska MicroSD. Batariga qaabkani waa 5.000 mAh, oo dhammaantood si dhakhso ah loogu shubay 33W, oo awood u leh inuu ku shubto 0 illaa 100% wax ka yar 45 daqiiqo.
Kaamirada weyn ee 'Redmi Note 10S' waa 64 megapixels, tan labaadna waa 8 megapixel aaladda lens-ka ee ballaaran, tan saddexaadna waa 2 megapixel macro halka kan afraadna uu yahay 2 megapixel qoto dheer. Muraayadda hore waa 13 megapixels. Nidaamku waa Android 11 oo leh MIUI 12.
Redmi Xusuusin 10 Pro hubaal waa mid ka mid ah kuwa casriga ah ee casriga ah ka soo saaraha, isagoo ah nooca 4G laakiin leh qiimo-qiime tayo leh oo xiiso leh. Qaabka caadiga ah waxaa lagu qiimeeyaa 239,99 euro on AliExpress, ahaanshaha mid ka mid ah iibkii ugu fiicnaa tan iyo markii la bilaabay.
Telefoonku wuxuu ku darayaa shaashad weyn oo 6,67-inch ah oo ah AMOLED Full HD + shaashadda oo leh heerka cusbooneysiinta ee 120 Hz iyo saamiga guddiga oo ah 20: 9. Difaaca ay ilaalineysaa waa Gorilla Glass, ku habboon in laga badbaadiyo wixii xoqan ama xoq ah, iyo sidoo kale kuuskuusyo yaryar ah iyo ka badan ah.
Moodhalkan Pro wuxuu go'aansaday inuu koriyo processor processor Snapdragon 732 (4G), marka lagu daro 6/8 GB oo RAM ah iyo kaydinta oo u dhexeysa 64 ilaa 128 GB. Batariga lagu dhisay waa 5.020 mAh oo leh 33W xawaare dhakhso ah, oo la mid ah waxa sameeya qaabka Redmi Note 10S, mobilada xiisaha leh.
Kaamirooyinka moodeelkani waxay kubilaabmayaan 108 megapixel sensor, kan labaadna waa 8 megapixel wide angle, kan saddexaadna waa 5 megapixel telemacro kan afraadna wuxuu yahay 2 megapixel kaaliyaha qoto dheer. Barnaamijka gundhigu waa Android 11 oo leh MIUI 12. Isku xirnaanta ay la timaado waa 4G, Wi-Fi, Bluetooth, NFC, infrared, iyo waxyaabo kaloo badan.
Wadada buuxda ee maqaalka: Androidsis » Aaladaha Android » Mobiles » Poco M3 Pro, Redmi Note 10S iyo Redmi Note 10 Pro oo ah qiimo aan laga hor istaagi karin